Zanu-PF rewards ex-Senior MDC-A with NPRC post? - The Zimbabwe Mail
HomeZimbabweZanu-PF rewards ex-Senior MDC-A with NPRC post?
May 8, 2021 Staff Reporter Zimbabwe 0
FORMER MDC-T vice president Obert Gutu, who joined Zanu-PF last month, has been appointed as a commissioner in the National Peace and Reconciliation Commission (NPRC) alongside five others.
They six were sworn in by President Emmerson Mnangagwa at the State House yesterday.
After joining Zanu-PF, Gutu has been singing praises of Mnangagwa and castigating the opposition MDC Alliance.
“It is, however, possible for a political party member to be appointed to the commission, but he or she must relinquish his or her membership of the political party within 30 days of such appointment,” section 236 of the Constitution reads.